Geofumadas… wiki roa 2 alohan'ny faran'ny taona 2011 - Geofumadas
Geofumed ... 2 wikileaks talohan'ny 2011 dia mifarana
Desambra, 2011 AutoCAD-Autodesk, Google Earth / Maps, Microstation-Bentley, My egeomates
Vao telo andro monja raha vita ny 2011, dia nomena alalana aho hampita ny vaovao roa farafaharatsiny izay hanova ny fiainantsika amin'ny 2012:
1. Mividy Bentley Systems i Microsoft.
Raha vao rentsika dia tonga tamin'ny fifanarahana farany i Microsoft mba hahazoana ny foiben'ny Bentley Systems tonga tao amin'ny Bentley Infrastructure 500; Mbola tsy fantatra ilay sary, nefa mampahatsiahy antsika ny antony mahatonga ny fiaraha-miasa amin'ny AutoDesk mihoatra ny herintaona lasa izay. Fa maninona ny style Office Ribbon ary mitovy amin'ny V8i, maninona ankehitriny DGN-iModel se afaka mamaky amin'ny Outlook, Windows7 sy Excel, fanapahan-kevitra lehibe momba ny rahalahy Bentley fa tsy hametraka ny orinasa amin'ny tsenambola.
2. G! Teraka ny ToolsConnect.
Manantena izahay alohan'ny faran'ny taona mba hanombohana ny dikanay voalohany amin'ny G! Tools Connect, fampiharana iray novolavolaina tao amin'ny Google Earth API, izay mamela, ankoatra ny zavatra hafa:
Amin'ny fisokafan'ny Google Earth dia alefaso ny baraingo AutoCAD. Mba hanaovana izany dia mila manana fahazoan-dàlana AutoCAD mavitrika ianao, izay mety ho fanabeazana ary na dia fanandramana aza, mihazakazaka ny installer ary mampiakatra ny UI dll rehetra miaraka amin'ny safidin'ny sosona, snaps ary tsipika baiko avy amin'ny Google Earth.
AutoCAD ao amin'ny Google Earth!
Ny zava-bita amin'izany dia ny fampiasa snaps izay efa ananan'i Google Earth (ny zava-mitranga dia tsy misy bokotra hampihetsika azy), araraoty ny mety hisian'ny snap AutoCAD ary satria izy io dia miasa miaraka amin'ireo vatan-kazo fotsiny, dia mihetsika fotsiny ilay sary background fakana tahaka an'i Google manahaka ny tontolo iainana roa. Miaraka amin'ny tranga misy sosona, dia ActiveX fotsiny izy izay manaiky ny safidin'i Boolean an'ny sosona ao amin'ny AutoCAD. Ny angona geometrika voatahiry ao amin'ny kml dia navadika ho fanamarihana xml ao anatin'ny dwg, ny ambiny kosa dia lasa toetra manakana.
Manana tahirin-tserasera misokatra ho an'ny AutoCAD Earthps.dll, npgeplugin.dll ary tsipika roa ao amin'ny PCOptimization.ini dia afaka manandratra an'i Google Earth ho toy ny sosona iray, mavitrika, toy ny sary tsy tafiditra na tsy mifanaraka. Mitovy amin'ny inona no ataon'i PlexEarth?, fa tsy mampiasa fampiharana ivelany fa miaraka amin'ny Google Earth running runtime toy ny KloiGoogle.
Ny kinova miaraka amin'ny Google Earth DirectX dia tsy handray afa-tsy ny fametrahana ireo programa roa. OpenGL dia ho afaka hanao izany amin'ny navigateur, io ihany no mila loharanom-pahalalana bebe kokoa na farafaharatsiny carte graphique (Midika izany fa tsy mandeha amin'ny $ 300 netbook)
Amin'izany fomba izany, amin'ny maody DirectX, dia afaka misintona tanàna iray manontolo misy vahaolana avo lenta izy ity, satria ny fanoloana ny npgeinprocessplugin.dll amin'ilay nampiasain'ny Google Earth Pro, dia hahatonga azy ireo hanana vahaolana avo kokoa, ary ho voatahiry ao anaty cache izy ireo mba hiasa toa an'i Google. Earth Portable. Mahaliana fa ity .dll ity ihany dia manahaka ny AutoCAD .arx izay mameno ny rasters, izay ahafahan'ny AutoCAD mijanona amin'ny data wms tsy misy Civil3D na AutoCAD Map.
Tsara indrindra, ny fitaovana dia afaka.
Ny fepetran'ny fifanarahana amin'i Bentley miaraka amin'i Microsoft sy ny dikan-dikan-ny G! ToolsConnect Afaka maka ity rohy ity ianao.
Previous Post«Previous Lahatsoratra eo anelanelan'ny 50 volana
Next Post Fianarana GIS an-tserasera, amin'ny Espaniôla, maimaim-poana ny sasanymanaraka »
2 mamaly ny "Geofumadas ... wiki roa 2 alohan'ny faran'ny 2011"
Miala tsiny. Ho an'ny Fetin'ny Adala tamin'ny volana aprily ...
Tsy nividy Bentley Systems i Microsoft.
Carlos Aular hoy izy:
: '(Tsy olona izany!